Apple TV သည် Appleမှ တီထွင်ထုတ်လုပ်လိုက်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လွန်ခဲသော ဆယ်စုနှစ်ကစ၍ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွင် complex simple ပုံစံ ပြုလုပ်ထားရှိခဲကြောင်း Apple ကို ရှုမြင်နိုင်သည်။ တစ်ကိုယ်ရေသုံးကွန်ပျူတာလောကတွင် iMac ဖြင့် ထင်ပေါ်ခဲ့သလို အလွ ...
Arduino ဆိုသည်မှာ အလွယ်တကူ အသုံးပြု၍ရသော ဟတ်ဒ်ဝဲလ် နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များကို အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ထားသော open-source prototyping platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ Open-source ဆိုသည်မှာ အဆိုပါ hardware များ တည်ဆောက်ထားပုံနှင့် software များ ရေးသားထားသည့် နည်းစနစ်မျ ...
Pixel ဟုခေါ်သည့် အလင်းစက်ကလေး ထောင်ပေါင်းများစွာပါဝင်နေသော ကွန်ပျူတာ ဖန်သားပြင် ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖန်သားပြင် ပေါ်တွင် ပုံရိပ်များကို ရေးခြယ်ရန် အသုံးပြုသည့် Program များတွင် Pixel များကို အဖွင့်အပိတ် လုပ်ပေးရသည်။ သို့မဟုတ် ပုံရိပ်တစ်ခု ဖန်တ ...
Circuit တစ်ခု၊ Stage တစ်ခု သို့မဟုတ် operation တစ်ခုအား ယင်း၏ ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ရှားမှုဖြင့် လိုချင်သည့် အခြေအနေတစ်ရပ်သို့ ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် နည်းစနစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။" to pool yourself up by your bootstraps ” ဆိုသည့် အင်္ဂလိပ် ...
Chat သင်္ကေတ ကို Smiley ဟုလည်း သိကြသည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုဖူးသူတိုင်း Messengerများ Chat ခန်းများဖိုရမ်နှင့် Message-Boardများပေါ်တွင်:-) သဏ္ဍန်အားမြင်တွေ့ အသုံးပြုသူတွေချည်းဖြစ်သည်။ ထိုသဏ္ဍန်သည် အသုံးပြုသူ၏ စိတ်ခံစားမှုအား ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့် ...
Design thinking ဆိုသည်မှာ ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့် တီထွင်ဖန်းတီးခြင်းဆိုင်ရာအတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ အောက်ပါ အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခြင်း/ ခံစားနားလည် ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ခြင်းEmpathize တွေးတောကြံဆခြင်း Ide ...
Squall Leonhart သည် Squaresoft မှထုတ်ဝေသော RPG အမျိုးအစားဂိမ်းဖြစ်သည့် Final Fantasy VIII ၏ အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။ Squall သည် အခြားသောဂိမ်းများတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Kingdom Hearts ဂိမ်းစီးရီးတွင် Leon ဟူသော အမည်ဖြင့်ပါဝင်ခဲ့သည်။ Final ...
Mathematical thinking ဆိုသည်မှာ သိပ္ပံ ၊ နည်းပညာ နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာရပ်များအား ဖြေရှင်းရာတွင် အသုံးပြုသော လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန် သင်္ချာတွက်ခြင်းနှင့် မတူညီပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် အခြေခံပညာ ...
Modeling နည်းလမ်းကို သိပ္ပံသုတေသနလုပ်ငန်များတွင် ရှေးယခင်တည်းက အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် သိပ္ပံနယ်ပယ်သစ်များဖြစ်သော design engineering, construction ၊ ဗိသုကာ၊ နက္ခဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ နှင့် နောက်ဆုံးမှာတော့ လူမှုရေး သိပ္ပံ ဘာသာ ...
wordpress ဆိုသည်မှာ blogging script တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ wordpress 3.0နောက်ပိုင်းတွင် joomla နှင့် Drupal များကဲ့သို့ Content Management System နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်လိုက်မှီလာသဖြင့် အချို့ကလည်း CMS အဖြစ်ရည်ညွန်းခေါ်ဆိုကြပါသည်။ ဝါ့ဒ်ပရက်စ် ကို WordPress. ...
ကရိုရှေးဆိုသော စကားမှာ ပြင်သစ် စကား ကရော့မှ ဆင်းသက်လာ၍ ချိတ် ဟူသော အနက်ကို ဆောင်လေသည်။ ဤဇာထိုးနည်းတွင် အဖျား၌ ချိတ်ပါသော သံမဏိ သို့ မဟုတ် အရိုးဆံထိုးအပ်တစ်ချောင်းဖြင့် ဇာပန်းကွက်ပေါ်အောင် ဖေါ်ယူရလေသည်။ ဇာကြမ်းပေါက်များကို ဖေါက်ရန် အရိုးဖြင့် ပြုလ ...
ကလိုင်ဒိုစကုပ် ဆိုသည်မှာ လူကြိုက်များသော ရုပ်စုံမှန်ပြောင်းကလေးပင်ဖြစ်၏။ ကြည့်နေစဉ် မှန်ပြောင်းကို လှည့်ပေးသောအခါ၊ တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ပြောင်းသွားသော တောက်ပြောင်လှပသည့် ရောင်စုံ ပုံစံအမျိုးမျိုးကို တွေ့မြင်ရ သည်။ ထိုကရိယာကို ဆာဒေးဗစ်ဗရူးစတား ဆိုသူက ...
မြစ်ကူးချောင်းကူး တံတားကြီးများကို ဆောက် လုပ်ရာ၌ တံတား အုတ်တိုင်ကျောက်တိုင်ကြီးများကို ရေပြင် အောက်မြေကြီးထဲသို့ အတော်နက်အောင်စိုက်၍ ဆောက်လုပ် ထားရလေသည်။ ယင်းသို့ ရေပြင်အောက်ရှိ မြေကြီးထဲတွင် အုတ်မြစ်ချ၍ တိုင်စိုက်ထူရန်မှာ လွယ်ကူသောအလုပ် မဟုတ် ပေ ...
ကြည်လင်ပြတ်သား ရုပ်မြင်သံကြား ၊ ၊အတိုခေါက် ဆိုသည်မှာ သာမန် ရုပ်မြင်သံကြားစက်များထက် ပုံရိပ်အစက် ပို၍များခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ပုံရိပ်အစက်များသည် နည်းပညာ မြင့်မားသည်နှင့်အလျောက် ပို၍သေးကာ၊ ပုံသား အရေအသွေးလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ အိပ်ခ်ျဒီတီဗီ HDT ...
အဝေးတစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ အချက်အမှတ်အသားဖြင့် သတင်းပို့နိုင်သော ကိရိယာဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ခလုပ်ဖြင့် နန်းကြိုးသွယ်တန်း၍ဖြစ်စေ၊ အသံလွှင့်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်စေ လွှင့်ပို့နိုင်သည်။ ထိုစနစ်ကို ၁၈၄၄-ခုနှစ်တွင် ဆင်မြူတဲလ်မော့စ်က ဝါရှင်တန်မှ ဘာတီမိုး အရပ်သို့ ...
ကွန်ရက် ကြားနေရေးဝါဒ ၊ အင်တာနက် ကြားနေရေးဝါဒ လည်း ဖြစ် သည်) သည် အင်တာနက် တွင် ပါဝင်သော အသုံးပြုသူ ဆက်သွယ်သည့် ကွန်ရက်များ အ တွက် လျာထားသော ဥပဒေသ ဖြစ်ပြီး ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာ၊ ဆိုဒ်များ၊ ပလက်ဖောင်း များ၊ တွဲဆက်ကောင်း တွဲဆက်နိုင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယ ...
ခရိုနိုမီတာဆိုသည်မှာ ရေကြောင်းခရီး သွားလာသော ယာဉ်များတွင် တပ်ဆင်လေ့ရှိသော အလွန်တိကျ မှန်ကန်သည့် နာရီမျိုး ဖြစ်သည်။ ၁၇၆၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဂျွန်ဟာရီဆင် ဆိုသူက စတင် တည်ထွင်ခဲ့သည်။ သင်္ဘောသားများသည် မိမိတို့ ရောက်ရှိရာဒေသ၏ လောင်ဂျီတွဒ်မျဉ်းကို တိကျစွာ ရ ...
ဂဟေဆိုသည်မှာ သတ္တုများကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်ရန် အတွက်သော်၎င်း၊ သတ္တုများကို ဖာထေးရန်အတွက်သော်၎င်း အသုံးပြုသော သတ္တုစပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဂဟေပြုလုပ်ရာ၌ အရေး ကြီးသောအချက်မှာ ဂဟေသည် ဆက်ယူမည့် သတ္တုများထက် ပို၍ အရည်ပျော်လွယ်နိုင်ရမည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ဂဟေသည် ဂ ...
ဂူဂဲလ်မျက်မှန် ကို ဂူဂဲလ်ကုမ္ပဏီက တီထွင်ထုတ်လုပ်သည်။ ထိုမျက်မှန်ကို ဝတ်ဆင်နိုင်သောကွန်ပျူတာ အမျိုးအစားအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ အသုံးပြုသူ၏ မြင်ကွင်းအတွက် အကြည်‌ရောင်ဖန်တုံးတစ်ခုကို အသုံးပြုသည်။ ထိုစနစ်ကို optical head-mounted displayဟု ‌ခေါ်သည်။ ဂူဂဲလ်မ ...
ဂျိုင်ရိုစကုပ်ဟူသည်ကား လည်ပတ်နိုင်သော ဘီးတစ်ခုကို လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားနိုင်သော ဝင်ရိုးတစ်ခုပေါ်၌ တပ်ဆင် ထားသည့် ကိရိယာပင် ဖြစ်သည်။ ဂျိုင်ရိုတော့ခေါ် ကလေး ကစားရာဂျင်ကို အချို့မြင်ဘူးကြပေမည်။ ယင်းမှာ လက်တွေ့ စမ်းသပ်ခန်းတွင် ထားရှိအသုံးပြုလေ့ရှိသော ...
လူ၏ယဉ်ကျေးမှု တိုးတက်လာခဲ့ရာ၌ မူလက လက်ဖြင့် ပင်ပန်းစွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ရသော အလုပ်များကို လက်သုံး ကိရိယာ တန်ဆာပလာတို့၏ အကူအညီဖြင့် တဖြည်းဖြည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ ကြ၏။ ထိုမှတစ်ဆင့် လက်သုံးကိရိယာ တန်ဆာပလာအတွက် သာလွန် ကောင်းမွန်သည့် စက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုလာ ...
စက်ရုပ် ဆိုသည်မှာ စက်မှု သို့မဟုတ် လူသားတို့ အတုအယောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဆောင်ရွက်သော အရာဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ စက်ရုပ်သည် အသွင်သဏ္ဌာန် အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ လှုပ်ရှားသွားလာပုံအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း မိမိဘာသာမိမိ ...
စက်ရုပ် ဥပဒေ သုံးရပ် သည် စိတ်ကူးယာဉ် သိပ္ပံစာရေးဆရာ အိုင်ဆက်မော၏ Runnaround ထဲမှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ယင်းဥပဒေအား ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ထုတ်နုတ်ဖော်ပြရလျင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ပထမ ဥပဒေနှင့်ဆက်စပ်၍ ဒွိဟဖြစ်စရာကြုံသည်မှလွဲလျင် စက ...
ယခုသင်ဖတ်ရှုနေတဲ့ စာပိုဒ်ကို သင့်ဘေးနားမှ တစ်စုံတစ်ယောက်က အသံထွက်ဖတ်ရှုပေးနေမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလား။ ဒီလိုသာဆိုရင် သင့်မျက်လုံးကို အနားပေးထားလို့ရသလို အခြားအလုပ်တစ်ခုခုကိုလည်း တစ်ပြိုင်တည်း လုပ်ကိုင်လို့ရနိုင်မယ်လေ။ ဥပမာ သင်မီးပူတ ...
စီပွားရေးတစ်ရပ်ကို စတင် လှုပ်ရှားသွားစေသူအဖြစ် ဘောဂဗေဒ အစဦးပိုင်းကပင် သတိပြုမိဖော်ပြခြင်း ရှိခဲ့ပါသည် ၊ သို့သော် မကြာသေးမီက Mark Casson က ထောက်ပြရာတွင် ခေတ်သစ်ဘောဂဗေဒ သီအိုရီများအထိ ၎င်းတို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးဟုဆိုပါသည်။ သတင်းအချက်အ ...
ဆိုနီ အိပ်စ်ပီးရီးယား သည် ဆိုနီမှ ထုတ်လုပ်သော စမတ်ဖုန်းများနှင့် တက်ဘလက်များ၏ အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဤအမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ခဲ့သော ပထမဆုံး တက်ဘလက်ကို ၂၀၁၂ တွင် ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ Xperia အမည်မှ ...
ဆီလီကွန် ဗယ်လီ ဆိုသည်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ဆန်ဖရန်စစ္စကို ပင်လယ်အော်ဒေသကို ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုသော အသုံးအနှုန်း ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးသော နည်းပညာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကော်ပိုရေးရှင်းများ တည်ရှိသ ...
မင်နှိပ်စက္ကူပေါ်၌ မင်ပျံ့သွားပုံ၊ မီးစာတစ်လျှောက်ကို ဆီ သို့မဟုတ် ရေနံဆီတက်လိုက်လာပုံ၊ ရေကို မျက်နှာသုတ်ပဝါက စုတ်ယူပုံစသော အခြင်းအရာများမှာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တွေ့ကြုံ နေရသော ကိစ္စဖြစ်သည့်အလျောက်၊ များသောအားဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့သည် ဤကိစ္စကို ထွေထွေထူ ...
စကားပြောကြေးနန်းတွင် ၁ စကားပြောခွက်၊ ၂လျှပ်စစ် ဓာတ်နှင့် ၃နားထောင်ခွက်ဟူ၍ ပစ္စည်းသုံးမျိုး အဓိက ပါဝင် သည်။ စကားပြောခွက်ထဲသို့ စကားပြောလိုက်သောအခါ ပါးစပ်မှ အသံလှိုင်းတို့သည် စကားပြောခွက်တွင် တပ်ဆင် ထားသော ဒိုင်အာဖရမ်ခေါ်ပါးလွှာသည့် သတ္တုချပ်ပြားကိ ...
တဆက်တည်းဖြစ်နေသော ဆစ်ဂနယ်များ သို့မဟုတ် အချိန်တဆက်တည်း ဖြစ်နေသော ဆစ်ဂနယ်များ ဆိုသည်မှာ အချိန်နှင့် တပြေးညီ ပြောင်းလဲနေသော ဆစ်ဂနယ်များကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော ဆစ်ဂနယ်များကို ဂရပ်ဖြင့် ဖော်ပြရာတွင် အိတ်စ် ဝင်ရိုးတွင် အချိန် ကို ဖော်ပြပြ ...
တယ်လီဗစ်ရှင်းသည် အသံကိုကြား‌စေ၍ အရုပ်ကိုလည်း မြင်‌စေ‌သော ‌ရေဒီယို တစ်မျိုးပင်ဖြစ်၏။ တယ်လီဗစ်ရှင်းသည် ယခုအခါ စမ်းသပ်သည့်အဆင့်မှ လက်‌တွေ့အသုံးချသည့် အဆင့်သို့ ‌ရောက်လာပြီဖြစ်ရာ မကြာမီပင် ကမ္ဘာအနှံ့အပြား၌ တယ်လီဗစ်ရှင်း ‌ခေတ်စားလာမည့် အရိပ်အ‌ယောင်ကို ...
ထုတ်လုပ်မှု ထုတ်လုပ်ခြင်း သည် ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ နှင့် အလုပ်သမားများကို အသုံးပြု၍ အရာဝတ္ထုများအား ပြုလုပ်ရန် သို့မဟုတ် ရောင်းချရန် သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန် အတွက်သုံးနှုံးသည်။ ရှေးယခင်က လူသားတို့သည် လက်ဖြင့် ပြုလုပ်လာခဲ့ရာမှ ယနေ့ခေတ်တွင် အဆင့်မြင့် ...
1.Internet နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ computer တစ်ခု computer များကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အမည်တစ်ခုအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။domain name ကို website ရဲ့ URL မှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖော်ပြပါတယ်။။ဒီလို domain name မျိုးကို host name လို့လည်း ခေါ်ပါသေးတယ်။ 2.domain nam ...
ဒီဇိုင်းနာဟူသည် ဒီဇိုင်းပညာကို နားလည်ပြီး အနုပညာ အလှတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်သော ပညာရှင်ကို ခေါ်ပေသည်။ ဒီဇိုင်းနာ အမျိုးမျိုးရှိသည်။ broadcast designer motion designer textile designer အစားအသောက် ဟင်းလျှာပြင်ဆင်သော ဒီဇိုင်းနာ၊ အဆောက်အဦး ပုံစံပြုသော ဒီ ...
ဒေတာ စင်တာ ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာစနစ်များ နှင့် ၎င်းတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသာ စနစ်များဖြစ်သည့် ဆက်သွယ်ရေး စနစ်များ နှင့် အချက်အလက်များအား သိုမှီးသိမ်းဆည်းသည့် စနစ်များကို ထားရှိရာ အဆောက်အဦးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အပို သို့မဟုတ် အရေးပေါ်သုံး ဓာတ်အား ...
နျူကလီးယားစွမ်းအား သည် စွမ်းအင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး နျူကလီးယားဓာတ်ပြုမှုများ ထိန်းချုပ်ထားရာမှ ထုတ်ယူရရှိသည်။ ရောင်းတန်းစက်ရုံများသည် လက်ရှိအချိန်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် နျူကလီးယားပြိုကွဲမှု တုံ့ပြန်ချက်များကို အသုံးပြုသည်။ လျှပ်စစ်သုံးစွဲမ ...
နျူးကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖို ဆိုသည်မှာ နျူကလီးယားထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ပေါင်းဖိုကို ခေါ်သည်။ ဓာတ်ပေါင်းဖို အလုပ်လုပ်ပုံမှာ နျူကလီးယားပြိုကွဲခြင်း က ထွက်လာသည့် အပူနှင့် ရေနွေးငွေ့ ဖြစ်ပြီး၊ တာဘိုင်ကို မောင်းစေခြင်းဖြစ်သည်။ အတွေ့ရများသော ဓာတ်ပေါင ...
ပရိုဂရမ်သဒ္ဒါလည်းကြည့်။ ကွန်ပြူတာပရိုဂရမ် ဆိုသည်မှာ အလုပ်တစ်ခုခုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ညွှန်ကြား ချက်များကိုစုစည်းထား သော ညွှန်ကြားချက် အစုအဝေးကို ခေါ်ဆိုပါသည်။ အဆိုပါညွှန်ကြားချက် အစုအဝေးများပေါင်း စုထားသော ပရိုဂရမ်အစုအဝေးကို ကွန်ပြူတာဆော့ဝဲဟ ...
ပလေးစတေရှင် ၂ သည် ဆိုနီ ကွန်ပျူတာ ဖျော်ဖြေရေး မှ ထုတ်လုပ်သော ပလေးစတေရှင်အုပ်စုဝင် ဒုတိယမြောက် ဗီဒီယိုဂိမ်းစက်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး နောက်နှစ်တွင် မြောက်အမေရိကနှင့် ဥရောပသို့ ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ခြ ...
ပလေးစတေရှင် ၃ သည် ဆိုနီ ကွန်ပျူတာ ဖျော်ဖြေရေး မှ ထုတ်လုပ်သော အိမ်သုံးဗီဒီယိုဂိမ်းစက် အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ပလေးစတေရှင် အုပ်စုဝင် ပလေးစတေရှင် ၂၏ နောက်ထွက်မျိုးဆက်သစ် ဂိမ်းစက်လည်းဖြစ်သည်။ သတ္တမမြောက် ဂိမ်းဆက်မျိုးဆက်အဖြစ် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏ အိပ်စ်ဘောက်စ ...
ပလေးစတေရှင် ၄ သည် ဆိုနီ ကွန်ပျူတာ ဖျော်ဖြေရေး မှ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသော အိမ်သုံးဗီဒီယိုဂိမ်းစက် အမျိုးအစား ဂိမ်းစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပလေးစတေရှင် ၃၏ နောက်ထွက်မျိုးဆက် အဖြစ် ကြေငြာခဲ ...
လုပ်ငန်းကြီးများနှင့် သိပ္ပံပညာကို လိုက်စားသူများသည် အလွန်မြင့်မားသည့် အပူချိန်များကို တိုင်းတာနိုင်မည့် ကိရိယာ များကို အလိုရှိကြလေသည်။ လေပြင်းဖိုများမှာ ဖြစ်စေ၊ လျှပ်စစ်မီးစွယ်မှ ဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသော အပူချိန်များကို သာမန်သာမိုမီတာများဖြင့် တိုင် ...
ဖပ်ဇီလောဂျစ် ဆိုသည်မှာ တန်ဖိုးအများအပြားကို ရည်ညွှန်း ဖော်ပြသော လောဂျစ် အမျိုးအစား တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးအသေထားခြင်း နှင့် အတိအကျ မဟုတ်ဘဲ ခန့်မှန်းတန်ဖိုးဖြင့် သုံးသပ်ရသော နေရာများတွင် ဖပ်ဇီ လောဂျစ်ကို အသုံးပြုကြသည်။ ပုံမှန် အသုံးပြုနေကြသော ဘို ...
ဖိုရီယာ ထရန်စဖောင်း ဆိုသည်မှာ ဆစ်ဂနယ်များကို အချိန်ကာလ အလိုက် ပြောင်းလဲမှု အဖြစ် ဖော်ပြထားခြင်းမှ ကြိမ်နှုန်း ပြောင်းလဲမှု အဖြစ် ပြောင်းလဲဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ သင်္ချာ အခေါ်အဝေါ်ဖြင့် ပြောရမည် ဆိုလျှင် ဆစ်ဂနယ်၏ ဖော်ပြချက်ကို အချိန် ဒိုမိန်း မှ ကြိ ...
လူတို့၏ ခိုလှုံမှုအတွက် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ရေး ၌ အဆောက်အအုံပစ္စည်းများနှင့် ရာသီဥတု ကာကွယ်မှုများ၊ နေရေး၊ စားရေး၊ အိပ်ရေး စသည်များကို မိမိတို့၏ ဘာသာအယူဝါဒနှင့် လူမျိုးရိုးရာ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ဦးစီး၍ တည်ဆောက်သူကို ဗိသုကာ ဟု ခေါ်ကြ၍ ယင်းသို့ တည် ...
ဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုသည်မှာ ယခု မျက်မှောက် ခေတ်ကာလတွင် နေ့စဉ်ပတ်သက်နေရသည့် ဘ၀တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူတိုင်း လူတိုင်းသည် ဘဏ်အကောင့်များ အကြောင်း ဘဏ်လုပ်ငန်းများ အကြောင်းကို အနည်းနှင့် အများ နားလည် သဘောပေါက်ထား သင့်သည်။ ယခု ဆော ...
ဘားကမ့် ဆိုသည်မှာ သမာရိုးကျ ပြုလုပ်နေကျ နည်းပညာ ဟောပြောပွဲပုံစံမှ ခွဲထွက်ပြီး လူအများစုပေါင်းကျင်းပသော လွတ်လပ်တဲ့ အသိပညာမျှဝေနိုင်သော နည်းပညာ ဖလှယ်ပွဲ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဘားကမ့်တွင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း ဆီမှ မိမိတို့ သိရှိထားသမျှသော အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ ...
ဘားကမ့်ဆိုသည်မှာ သမာရိုးကျ ပြုလုပ်နေကျ နည်းပညာ ဟောပြောပွဲပုံစံမှ ခွဲထွက်ပြီး လူအများ စုပေါင်းကျင်းပသော အသိပညာမျှဝေနိုင်သော လွတ်လပ်သည့်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဘားကမ့်တွင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီက မိမိတို့ သိရှိထားသမျှသော အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများကို ဆွေးနွေး ...
Barcode- ဆိုသည်မှာ အလင်းဖြင့်ထိုးပြီး စက်ဖြင့် ဖတ်နိုင်သော အချက်အလက်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်ဖက်မြင် ဘားကုတ် နှင့် နှစ်ဖက်မြင် ဘားကုတ် ဟူ၍ နှစ်မျိုး ခွဲခြားထားသည်။ တစ်ဖက်မြင် ဘားကုတ်များတွင် အချက်အ လက်များကို ဒေါင်လိုက်လိုင်း များတွေအဖြစ် နေရာ ...